वर्ष २०७८ : पुस्ता हस्तान्तरणदेखि खेलाडी र क्यान विवादसम्मले तातेको क्रिकेट वर्ष — Purbicommand
एमाले उर्लाबारी अध्यक्ष बास्तोला र नेता ढकालले धोका दिएको भन्दै युवा संघका नगर सचिब धिमालले जनाए आपत्ती
प्रचण्ड, माधव र बाबुरामद्वारा निजगढ विमानस्थलको सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनको माग
उर्लाबारी नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यमा सबै सर्वसम्मत, न्यायपालिका पनि एमालेकै हुने !
अरनिको हस्पिटलको बार्षिक उत्सवमा अपाङ्ग ब्यक्तिहरुको निःशुल्क उपचार
बालेनकी श्रीमति सविना काफ्ले सामाजिक सञ्जालमा लेख्छिन्–तिमी मेरो बालेनबाट हाम्रो बालेन भएका छौं
रञ्जन कोइरालाको फैसला सर्वोच्चले उल्ट्यायो, अब साढे ११ बर्ष जेल बस्नुपर्ने
वर्ष २०७८ : पुस्ता हस्तान्तरणदेखि खेलाडी र क्यान विवादसम्मले तातेको क्रिकेट वर्ष
२०७९ बैशाख १, बिहीबार ०८:११ गते
काठमाडौं, वर्ष २०७८ नेपाली क्रिकेटको लागि मिश्रित रह्यो । खेलाडीले मैदानमा आफूलाई प्रमाणित गरे । अनुभवी खेलाडीलाई प्रतिस्थापना गर्दै नयाँ खेलाडीको आगमनसमेत भयो । खेलाडी र नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को विवादसँगै लगातार प्रतियोगिताले क्रिकेट क्षेत्र प्राय चर्चामा रहिरह्यो । यसै वर्ष नेपालले केही विदेशी भूमिमा त केही घरेलु मैदानमा प्रतियोगितासमेत खेल्यो ।
घर बाहिर भएका प्रतियोगितामा नेपाल आफ्नो लक्ष्य अनुसार सफलता पाउन सकेन । यद्यपि, घरेलु मैदानमा भएका शृंखला भने आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो । यस वर्ष नेपालले घरेलु मैदानमा दुई अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० शृंखला खेल्यो । दुबै घरेलु दर्शकमाझ आफ्नो पोल्टामा पार्‍याे ।
वर्षको सुरुवातमा नेपाल, मलेसिया र नेदरल्याण्ड सम्मिलित त्रिदेशीय शृंखला खेल्यो । यस्तै वर्षको अन्त्यमा भएको नेपाल, मलेसिया र पुपुवा न्युगिनी (पीएनजी) सम्मिलिन टी-२० शृंखला पनि आफ्नै पोल्टामा पार्‍याे । यसबाहेक नेपालले टी-२० विश्वकपको ग्लोबल छनोट, आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग-२, श्रीलंकामा अभ्यास खेल र घरेलु मैदानमा पीएनजीविरुद्ध एकदिवसीय शृंखला खेल्यो ।
यस वर्ष नेपाली क्रिकेट टिमले दुईवटा प्रशिक्षकसमेत पायो । पुस २०७६ मा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत आएका डेभ वाटमोरले भदौमा आईसीसी लिग डिभिजन-२ पछि नेपाली टिम छाडे । उनकै नेतृत्वमा नेपालले गत वैशाखमा भएको टी-२० शृंखला जितेको थियो ।
पारिवारिक समस्या देखाउँदै वाटमोरले नेपाल छाडेलगत्तै उनको स्थान लिन पूर्वप्रशिक्षक पुबुदु दासानायके नेपाल आएका छन् । उनी विश्वकप ग्लोबल छनोटमा असफल भए पनि घरेलु मैदानमा यसै महिना भएको त्रिदेशीय टी-२० क्रिकेटको उपाधि भने नेपाललाई जिताउन सफल भए ।
टी-२० विश्वकपको ग्लोबल छनोटमा भने नेपाल सेमिफाइनलमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)सँग सेमिफाइनलमा ६८ रनले पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरियो । योसँगै नेपालले दोस्रो पटक विश्वकप खेल्ने सपना पूरा गर्न सकेन ।
वर्ष २०७८ खेलाडीका लागि झनै विशेष रह्यो । केही खेलाडीले ठूला उपलब्धीसमेत हात पारे । यस्तै कीर्तिमानको भने चांङ नै लाग्यो । यस वर्ष नेपाली ब्याटरबाट तीन शतक निस्केका छन् । त्यसअघि जम्मा दुई नेपाली ब्याटरले शतक प्रहार गरेका थिए ।
यस वर्ष युवा ब्याटर कुशल भुर्तेलको नाममा पहिलो शतक बन्यो । उनले टी-२० विश्वकपको ग्लोबल छनोटमा फिलिपिन्सविरुद्ध अविजित १०४ रन बनाए । यसअघि पूर्व कप्तानद्वय पारस खड्का र ज्ञानेन्द्र मल्लले शतक प्रहार गरेका थिए ।
वैशाखमा भएको टी-२० शृंखलामा प्रशिक्षक वाटमोरले डेब्यु गराए यता कुशलले पाँच अर्धशतक र एक शतकसहित ५७३ रन बनाइसकेका छन् ।
अर्काे शतक बनाउने खेलाडीमा सुदूरपश्चिमका दीपेन्द्र सिंह ऐरी पर्छन् । उनले यस वर्ष एक शतकसहित पाँच अर्धसमत बनाए । उनले पीएनजीविरुद्ध भएको दोस्रो खेलमा १०५ रन बनाएका थिए । उनी नेपाली क्रिकेटमा एक हजार रन बनाउने एक्ला खेलाडीसमेत हुन् ।
शतक बनाउने तेस्रो खेलाडी हुन् युवा ब्याटर रोहितकुमार पौडेल । उनले घरेलु मैदानमा पीएनजीविरुद्ध १२६ रन बनाएका थिए । उनको नाममा एकै इनिङमा सर्वाधिक रन बनाउने नेपाली खेलाडीको कीर्तिमान छ ।
यता, अलराउण्डर करण केसीले कीर्तिमान राख्दै ह्याट्रिकसहित पाँच विकेट लिए । बलिङमा यस्तो प्रदर्शन गर्ने करण एक्ला नेपाली खेलाडी रहे । पीएनजीविरुद्ध टी-२० क्रिकेटमा ३ दशमलव ४ ओभर बलिङ गरेका करणले २१ रन खर्चिएर ५ विकेट लिएका थिए ।
यी त भए मैदान भित्र खेलाडीले पाएका ठूला उपलब्धी । अब, मैदान बाहिरका कुरा गराैँ। एक समय नेपाली क्रिकेट क्षेत्रमा यस्तो पनि बन्यो, राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षणमा खेलाडी उपलब्ध पनि भएनन् । कारण थियो खेलाडी र क्यानबीचको विवाद ।
खेलाडी वर्गीकरणको विषयलाई स्वयं खेलाडीले क्यानमा कुरा उठाउनुको सट्टा मिडियाबाजी गरेको र आचारसंहिता उल्लघंन गरेको भन्दै क्यानले तत्कालीन कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लसहित खेलाडीलाई केन्द्रीय सम्झौताबाट बाहिर राख्ने निर्णय गर्‍याे ।
क्यानको २९ मंसिरमा बसेको बैठकले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै तत्कालीन कप्तान ज्ञानेन्द्र, उपकप्तान दीपेन्द्रलाई पदमुक्त साथै दुई खेलाडीसहित कमलसिंह ऐरी र सोमपाल कामीलाई २०२२ को सुरुवाती ६ महिना केन्द्रीय सम्झौतामा नराख्ने निर्णय लिएको थियो ।
६ महिना क्यानले कारबाही स्वरुप पारिश्रमिक रोक्का गर्ने र नयाँ कप्तानको रुपमा सन्दीप लामिछानेलाई जिम्मेवारी दिएपछि खेलाडी झनै आक्रोसित भए र विवाद झनै सतहमा आएको थियो ।
यसपछि खेलाडी नजिकै रहेको विश्वकप ग्लोबल छनोटको तयारीका लागि होटेल रिपोर्टिङ गर्न समेत आनाकानी गरे । करण केसीलगायत अन्य खेलाडीले बाहिरै रहेर राष्ट्रिय टिमका खेलाडीलाई साथ दिएर अभ्यासमा उपलब्ध भएनन् । यसपछि क्यान नेतृत्वसमेत लचकता अपनाएपछि खेलाडी खेल्न तयार भएका थिए । यसपछि क्यानले कारबाहीसमेत फिर्ता लिएको थियो ।
यी त भए मैदान बाहिरका कुरा, अब फेरि मैदान भित्रका कुरा । वर्ष २०७८ मा क्रिकेटमा १२ खेलाडीले डेब्यु गरे । जसमा चार खेलाडीले टी–२० र एकदिवसीय (ओडीआई) मा डेब्यु गरे । यस्तै पाँच खेलाडीले टी-२० र तीन खेलाडीले ओडीआईमा डेब्यु गरे ।
कुशल भर्तेल, आसिफ शेख, सागर ढकाल र गुल्शन झा दुबै फर्म्याटमा डेब्यु गरे । यस्तै शाहव आलम, लोकेश बम, विवेक यादव, दिलीप नाथ र आलिद अन्सारीले टी-२० मा डेब्यु गरे । विक्रम सोब देव खनाल र भीम सार्कीले भने ओडीआईमा डेब्यु गरेका छन् ।
वर्ष २०७८ लाई सम्झिँदा यो वर्ष क्रिकेटर दीपेन्द्रमय भयो । चाहे त्यो मैदान भित्र या बाहिर होस् । यस्तै यस वर्षलाई भन्दा क्रिकेटमा पुस्ता हस्तान्तरण समेत भयो । १२ खेलाडीले डेब्यु गर्दा पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, विकेट किपर विनोद भण्डारी, शरद भेषावकरजस्ता अनुभवी खेलाडीको स्थान युवा खेलाडीले लिएका छन् ।
यसबाहेक क्यानले आफ्नो वार्षिक साधारणसभा समेत सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्न सक्यो । केही शृंखला आयोजना गर्‍याे । यस्तै घरेलु महिला लिग, पुरुष टी-२० लिग र यु–१९ महिला लिग सम्पन्न भएका छन् ।
पूर्वी कमाण्ड मिडिया प्रा.लि. द्धारा सञ्चालित
पान नं. ६१०१८८५२३
प्रधान सम्पादकः विपी भट्टराई प्रबन्धक निर्देशकः पुजन दास
समाचार संयोजकः ज्योति शर्मा
रतुवामाई प्रतिनिधिः खड्ग बेदना
पथरीशनिश्चरे प्रतिनिधिः संगीता राई
© 2022: Purbicommand मा सार्बधिक सुरक्षित छ. | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा